छवि र शिल्पाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी: पक्राउ गर्न खोजी जारी – Rapti Khabar
नेपाली फिल्म निर्माता छविराज ओझा र नायिक शिल्पा पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दुई जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
शिल्पा र छबि बीच भएको खटपट सल्टिन नपाउदै उनीहरु बहुबिबाहको फन्दामा परेका छन् ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले पूर्जी जारी भएको पुष्टि गरे । ‘हेमा ओझाले दिएको जाहेरीको आधारमा महिला सेल, कालिमाटीले अनुसन्धान थालेको छ’, प्रहरीका अनुसार अहिले दुवै जनालाई खोजी भैरहेको जनाइएको छ ।’
शिल्पालाई छविको पत्र–‘मेरो अदालतमा आउनुहोस्, न्याय पाउनुहुन्छ’
नायिका शिल्पा पोखरेल र निर्माता छविराज ओझाले ३ बर्ष अगाडि गुपचुप बिहे गरे । छवि र शिल्पाको बिहेको तस्वीर अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । एक रिसोर्टमा थोरै आफन्तको साथमा उनीहरुले केही घन्टामै बिहे गरेका थिए ।
शिल्पा र छविको बिहे गुपचुप भयो । बिहे हल्ला गरेर गर्ने तर अलग हुँदा गुपचुप गरेर एक अर्काको सम्मान गर्ने शैली नेपाली समाजमा धेरै देखिन्छ । तर, शिल्पा र छविको हकमा यो देखिएन । गुपचुप बिहे गरेका यी दुइको सम्बन्ध अहिले डिभोर्सको अवस्थामा पुगेको छ । शिल्पाका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा पनि उनीहरु डिभोर्स नजिक पुगेको वुझ्न सकिन्छ ।
छविले लेखेका छन्–‘मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भैसकेपछि तपाईसँग जीन्दगी बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगीका सबै कुरा संझौता गरेर बिहे गरेकी श्रीमती हो तपाई । छातीमा हा राखेर आज एकछिनलाई आफैलाइ नढाटी संझनुहोस् तपाइले लगाएका आरोपहरु कती सत्य छन् ? यदि, तपाई पनि आफूलाई सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आश्वासन दिलाए जस्तै वुढेसकालको साहरा बन्न सक्नुहुन्छ भने म पनि मेरा कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीवादी भएर बस्न सक्छु ।’
छवि भन्छन्–‘शिल्पासँगको बिबाद कुरा लगाउनेका कारण भयो’
निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलविचको घरयासी विवाद प्रहरी प्रभागसम्म पुग्यो । बिहिबार भएको छलफलमा उनीहरुले मिलापत्र त गरेका छन्, तर शिल्पा अब छविको साथमा फर्किन्छिन् या के गर्छिन् टुंगो छैन । शिल्पाको पक्षको कुरा सुन्दा कानुनी प्रक्रियामा जाने देखिएको छ । तर, निर्माता छविराज ओझा भने आफ्नोतर्फबाट शिल्पालाई डिभोर्स नदिने बताउँछन् । छविले मिडियाकर्मीसँग भने–‘यो मिडियामा नआउनुपर्ने कुरा थियो आयो । श्रीमान् श्रीमतीको झगडा जसको पनि पर्छ ।’
छविले घर फर्किने कि नफर्किने भन्ने कुरा शिल्पाको हातमा रहेको बताए । उनले भने–‘मेरो तर्फबाट डिभोर्स दिन्नँ । घर फर्किनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु ।’ छविले शिल्पासँग वि.सं २०७३ सालमा बिहे गरेको बताए । आफूले शिल्पालाई अब त बिहे भएको पनि सबैलाई थाहा भयो, आउनुहोस् मिलेर बसौला भनेर आग्रह गरेको सुनाए ।
शिल्पाले असार ८ गते घर छाडेकी थिइन् । यसपछि, छविले शिल्पालाई एकपटक पनि फोन गरेका छैनन् । यो बिषयमा छवि भन्छन्–‘उहाँको दाई विकास रौनियार आएर उहाँलाई लिएर जानुभएको हो । दिदी–भिनाजुकोमा गएको मान्छेलाई मैले किन फोन गर्ने ? बरु, उहाँहरुले मलाई शिल्पा झगडा गरेर आएकी छन्, किन हो भनेर फोन गर्नुपर्ने होइन ?’
छविले शिल्पा प्रहरी प्रभागबाट रुँदै निस्किएको बिषयमा भने–‘रुन त हामीलाई पनि आउँछ । रोटी एकहोरो पाक्दैन, दोहोरो नै पाक्नपर्छ । मैले उहाँलाई तपाई एक हुने बिषयमा सोच्नुहोस्, कसैले उचालेको भरमा उचालिएर नबस्नुहोस् भनेको छु ।’
छवि र शिल्पाविच २५ बर्षको अन्तर छ । तर, छवि आफूहरुमा असहमती आउनुमा उमेरको गल्ती मान्दैनन् । उनले भने–‘यो उमेर अन्तरले भएको कुरा नै होइन । यो कुरा लगाउनेहरुले उचालेर सिर्जना भएको परिस्थिती हो । श्रीमान् श्रीमतीको झगडा जहाँ पनि हुन्छ र मिलेर अघि बढ्छन् ।’ छविले घुमाउरो शैलीमा शिल्पाले अरुको कुरा सुनेकाले यो परिस्थिती आएको बताएका छन् ।